Ny hoavin'ny Oracle E-Business Suite sy ny famoahana lehibe amin'ny taona ho avy
E-business suite dia manosika ny fahalianan'ny orinasa amin'ny antony ara-drariny. Oracle no mpisava lalana amin'ny famolavolana, famoahana sy famoahana rindrambaiko momba ny angona, rafitra sy raharaham-barotra ary programan'ny Enterprise Software. Ny fikambanana dia manohy manavao ny orinasa Oracle E-business mba hahatonga azy ho vonona hoavy. Ny taona 2015 dia nanatri-maso ny fanovana Oracle ho mpamokatra rindrambaiko faharoa lehibe indrindra, taorian'ny Microsoft. Moa ve ianao liana loatra amin'ny fahafantarana ny fomba hijereny sy miasa ao anatin'ny taona vitsivitsy? Ity ny tantara iray manontolo, voatsikera amin'ny fitenenana:
Inona ny hoavin'ny Oracle E-Business Suite?
Fanavaozana lehibe amin'ny ho avy
Ny andraikitry ny Administrateur Suite eo amin'ny orinasa eo amin'ny orinasa:
EBS na Oracle E-Business Suite dia manolotra orinasa miasa amin'ny toeram-pambolena tokana miaraka amin'ny tahiry tokana. EBS dia misy
SCM - Fitantanan-draharaha momba ny varotra.
CRM - Fitantanana ny fifandraisan'ny Customer.
Fitantanana ny harena ankibon'ny tany.
Ny laharana voalohany amin'ny EBS dia natomboka tamin'ny 2007 ary hatramin'izao dia tonga lavitra izany. Amin'izao fotoana izao, ny andiany farany amin'ny Oracle dia amin'ny 12.2.6 ary mikasa ny handefa ny version manaraka amin'ny 2019 na 2020 miaraka amin'ny fanavaozana goavana.
Ny laharana voalohany amin'ny EBS dia natomboka tamin'ny 2007 ary hatramin'izao dia tonga lavitra izany. Amin'izao fotoana izao, ny andiany farany amin'ny Oracle dia amin'ny 12.2.6 ary maniry ny mandefa ny dika manaraka amin'ny 2019 na 2020 miaraka amin'ny fanavaozana goavana.
1. Dingana roa:
Tokony ho vonona hijoro vavolombelona roa isika mamoaka 12.2.7 ary 12.2.8 avy amin'ny 2019.
Oracle dia miomana amin'ny fanomezana alalana rahona ho an'ny tafika na sehatra governemanta izay mbola tsy milefitra amin'ny fifindra-monina amin'ny rahona. Ny angon-drakitra mafonja atolotry ireo fikambanana ireo dia manelingelina ny loza mitatao sy mitranga amin'ny Oracle amin'ny famotsorana ny EBN 12.3 izay azo ekena ho an'ny 100% fahitalavitra azo antoka amin'ny famindrana angona.
3. Ny hoavy dia rahona:
Ny fikambanana dia mifantoka amin'ny fampiasana ny SaaS (software-as-a-service) mba hahatonga ny orinasa afaka manazava fampahalalana goavana amin'ny 2030. Godwin avy any Oracle dia nanatsonga ny orinasa, izay hifindra amin'ny EBS amin'ny fotoana ara-potoana, dia hahita ireo serivisy SaaS vaovao entina any amin'ny fikambanana.
Ny famerenam-bidy, ny fitantanana ny orinasa, ny fandaniam-bola, ny tatitra momba ny fitazonana, ny fitehirizana ny rahona dia modules, izay azo ampiasaina amin'ny EBS. Ny ampiasain'ny Oracle ampiasaina amin'ny adapta ampiasain'ny SaaS ihany koa, dia tsy ho ela dia miketrika fototra mba hahazoana fiasa tsara kokoa sy mahomby.
4. Analytics mialoha:
Ny siansa momba ny fampahalalam-baovao dia zava-mahatsiravina amin'izao andro izao. Oracle dia manatontosa ny serivisiny SaaS ho an'ny Power Analytics Predictive ho an'ny fitantanana ny haren'ny orinasa. Ny serivisy vaovao dia lazaina fa be dia be ary manatsara ny fianarana fiara.
5. Fivoaran'ny finday:
Ny rindrambaiko finday azo ampiasaina dia ny fifantohana voalohany amin'ny Oracle sy ny mpifaninana aminy amin'ny hoavy. EBS dia iray amin'ireo dingana izay i Oracle dia miezaka mamelona ny Mobile Apps ary noho izany dia misimisy kokoa ny rahona ho an'ny fanorenana trano.
Ahoana ny fomba hamoronana asa iray ho mpitsabo EBS?
Miaraka amin'ny Oracle mitatitra ny habetsaky ny EBS amin'ny Enterprises, dia ilaina koa ny mandrindra ny fahaiza-manaon'ny EBS amin'ny dingana sy ny fetra. Ny fangatahana Oracle matihanina matihanina ho an'ny fanavaozana vaovao vaovao. Raha toa ka maniry ny hanomboka ny asany matihanina ianao amin'ny maha Oracle EBS manam-pahaizana, tokony handeha amin'ny fanamarinana Oracle ianao.
Inona no mety ho fanamarinana Oracle EBS?
Mihamaro hatrany ny orinasa dia hifindra any amin'ny Oracle E-Business Suite. Noho izany, hitombo ny lanjany sy ny votoatin-tsarin'ity mari-pamantarana mialoha ity, ahafahana manao asa bebe kokoa sy ny karama farany ambany amin'ny taona 2019 sy 2020. Izy io dia hanarona ny:
Ny fototry ny tahiry
Fomba mahazatra momba ny hevitra RDBMS sy ny SQL.
Oracle 9i na 10g.
Amin'ny maha-Administrateur Suite Business anao ianao dia mila manao ny andraikitra manaraka:
Soraty ary afeno ny data izay tokony hikarakara ny orinasa
Mivelatra ny fiovan'ny fifanakalozan-kevitra sy ny fanehoan-kevitra araka ny fepetra mifanaraka amin'izay takian'ny faritra
Datafotra mifandraika amin'ny fampiasana ny vondron'ny EBS ho an'ny tatitra sy ny fandinihana
Famakafakana ny Architecture Oracle Database ho an'ny asa mahomby
Fametrahana ny Oracle EBS Software
Manao Customizing Oracle Database
Mitantana ny Oracle Database araka ny fepetra fitakiana vaovao
Miezaha hahalala vaovao
Ny fametrahana sy ny fanavaozana ny fikandrana Backup
Oracle dia mandany vola amin'ny fanavaozana ny E-Business Suite mba hanamafisana orina telo asa fisaorana
Fahaleovan-tena sy UI
Oracle dia mitantana ny fanadihadiana goavana amin'ny orinasa voakasik'izany ary manangana ny torolàlana mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa. Mba hahafahan'ny mpanjifa mankafy ny tombotsoan'ny Cloud Infrastructure sy ny fampiharana amin'ny mpanjifa, ary avelao izy ireo hahazo tombontsoa amin'ny fampiasam-bola amin'ny EBS, ny injeniera dia miasa maharitra. Ny fanavaozana vao haingana dia tsy hiova be amin'ny EBS, fa kosa izy ireo dia entina hampidirana ny fampiroboroboana SaaS amin'ny EBS.
Azonao atao koa ny tianao:Torolalana fenoamin'ny Oracle Certification
8 Zavatra Zava-dehibe izay Tsy Maintsy Fantatrao Amin'ny Fomba ITILA